WatchOS 1 sy tvOS 4.3.1 beta 11.4 vonona ho an'ny mpamorona | Avy amin'ny mac aho
Vonona ny WatchOS 1 sy ny tvOS 4.3.1 beta 11.4 ho an'ny mpamorona
Apple dia tsy mijanona amin'ny fandefasana kinova beta ary efa manana ny kinova azo alaina ny mpamorona beta 1 an'ny watchOS 4.3.1 sy tvOS 11.4. Tsy misy fijanonana mety amin'ity resaka ity ary manan-danja amin'ny Apple sy ny mpampiasa azy ny kinova beta.
Amin'ireto kinova beta vaovao navoaka ireto dia tsy misy ny kinova beta 1 an'ny macOS, izay andao hanatratra ny tanan'ny mpamorona androany. Na izany na tsy izany dia tsara ny manohy mahita hetsika aorian'ny kinova ofisialy ary ity dia zavatra iray izay efa fanaon'i Apple antsika taloha.
Ny mpamorona dia hiandraikitra ny fitehirizana ireo kinova vaovao ireo saingy raha ny tokony ho izy dia toa misy vaovao momba ny fitoniana sy ny filaminana ny rafitra, ny fanatsarana ny fahombiazany ary ny fiasa vaovao vitsivitsy ao amin'ny rafitra.
Ny marina dia ny zava-dehibe amin'ireo kinova ireo dia mbola ho avy ao amin'ny WWDC amin'ny volana Jona izay nambaran'ny orinasa, saingy tsy dia be loatra ny fanantenana amin'ny vaovao hatrizay Apple dia efa nilaza fa hifantoka amin'ny fanatsarana OS hamahana olana izany, saingy mazava ho azy fa hanana zava-baovao isika amin'ny fandidiana ary azo antoka fa amin'ny farany dia gaga antsika izy ireo amin'ny fanovana ny asany. Manaraka ny sori-dalan'i Apple i Apple ary mazava izahay fa tsy tena zava-dehibe ireo fanovana ao amin'ireo kinova manaraka mbola hitantsika, saingy hanatsara sy hamaha hatrany ireo olana voamarika ao amin'izy ireo izy ireo, zavatra iray izay tsy isalasalana fa ankasitrahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Vonona ny WatchOS 1 sy ny tvOS 4.3.1 beta 11.4 ho an'ny mpamorona
Tonga hatrany amin'ny tanàna amerikanina bebe kokoa ny fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka
Ny valim-bola nataon'i Apple ho an'ny Q2 2018 dia haseho amin'ny 1 Mey